ဟိုက်ဂျက်ကားအမျိုးအစားတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ချို့ယွင်းမှုပြဿနာများနဲ့ စစ်ဆေးနည်းများ - Barnyar Barnyar
ဟိုက်ဂျက်ကားအမျိုးအစားဟာ ဂျပန်အခြေစိုက် Daihatsu ကားကုမ္မဏီက ထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ အသုံးများတဲ့ ကားအမျိုးအစားဖြစ်တယ်.
အင်ဂျင်ပါဝါ ၆၆၀ စီစီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆီစားသက်သာတဲ့ လုပ်ငန်းသုံးကားဖြစ်တယ်။ ဟိုက်ဂျက်ကားအမျိုးအစားမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ရေဆူတာ” ၂၀၁၁ မော်ဒယ်လ် ဟိုက်ဂျက်မှာ ဖြစ်တာပါ။ မောင်းနှင်နေစဉ်မှာ အပူရှိန် လွန်ကဲပြီး ရေတိုင်ကီ (radiator) ထဲက ရေတွေ ဆူပွက်လာတာပါ။ ဝပ်ရှော့ပ်မှာ စစ်ဆေးတဲ့အခါ cooling temperature sensor ပျက်စီးတာပါ။ အဲဒါကြောင့် cooling temperature sensorကို အသစ်လဲလှယ်ရမှာပါ…။
“မီး မကူးတာ” ၂၀ဝ၁ မော်ဒယ် ဟိုက်ဂျက်မှာဖြစ်တာပါ။ အင်ဂျင်က မီးမကူးတာ၊ ဆီမဖျန်းနိုင်တာတွေ ဖြစ်လာတာပါ။ ပြဿနာကတော့ engine control unit (ECU)က အလုပ် မလုပ်တာဖြစ်တယ်။
“စက်နှိုးလို့ မရတာ” ၁၉၉၅ မော်ဒယ်ဟိုက်ဂျက်ကို စက် စတင်နှိုးလို့ မရတဲ့ပြဿနာပါ။ သော့ကို လှည့်လိုက်တဲ့အခါ မီးလင်းလာပေမဲ့ စက်နိုးမလာတာပါ။
ပါဝါပေးတဲ့ စနစ်က ချို့ယွင်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကို စစ်ဆေးရမှာပါ။ ဘက်ထရီ ငုတ်တိုင်တွေမှာ ချိတ်ဆက်တဲ့ ဝါယာတွေကိုလည်း သန့်စင်ပြီး ချိတ်ဆက်မှု ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးရပါမယ်…။
“ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်ပြဿနာ” ၁၉၉၀ မော်ဒယ်လ် ဟိုက်ဂျက်မှာ ဖြစ်တာပါ။ ဟိုက်ဒရောလစ်ဘရိတ် (Hydrolic Brakes) က ပုံမှန်အလုပ် မလုပ်တော့တာပါ။
ဘရိတ် စနစ်တစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီး… ဘရိတ်ဆီ ယိုစိမ့်မှု ရှိ/ မရှိ ကိုလည်း စစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘရိတ်ဆီ ယိုစိမ့်တဲ့အတွက် ဘရိတ်ဖိအား ကျဆင်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…။
“ဂီယာ ပြဿနာ” ၂၀ဝ၇ မော်ဒယ် ဟိုက်ဂျက်မှာ… အော်တိုဂီယာ က ပုံမှန် အလုပ် မလုပ်တာပါ။ ဂီယာကို နံပါတ် ၃ အထိ ထားတဲ့အခါ အမြင့်ဆုံး တစ်နာရီ ၇၀ ကီလိုမီတာနှုန်းအထိ မောင်းနှင် နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နံပါတ် ၃ ဂီယာကနေ ပြောင်းလဲလို့ မရတာပါ။ အော်တိုဂီယာစနစ်မှာ ချို့ယွင်းချက် ရှိနေတာပါ…။
“ပါဝါစတီယာရင် ပန့်မ်” ၂၀ဝ၃ မော်ဒယ်လ် ဟိုက်ဂျက်မှာ ပါဝါစတီယာရင် ပန့်မ် (power steering pump) ချို့ယွင်းတတ်တာပါ။ အသစ် လဲလှယ်ရမှာပါ…။
“ဆီစားနှုန်း များလာတာ” ၂၀ဝ၇ မော်ဒယ်လ် ဟိုက်ဂျက်မှာ ဖြစ်တာပါ။ အိတ်ဇောက မီးခိုးထုတ်လွှတ်တာ နည်းပါးပေမဲ့… ဆီစားနှုန်း များလာတာပါ။
အခြား ဟိုက်ဂျက်ကားတွေ လောင်စာဆီ တစ်လီတာကို ၁၄ ကီလိုမီတာ မောင်းနှင်ရပေမဲ့ အဲသည်ဟိုက်ဂျက်ကတော့ လောင်စာဆီ တစ်လီတာကို ၁၁ ကီလိုမီတာသာ မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်…။
“အင်ဂျင်ချက် မီးလင်းတာ” ၂၀ဝ၃ မော်ဒယ်လ် ဟိုက်ဂျက်မှာ အင်ဂျင်ချက် မီးလင်းလာတာပါ။ မောင်းနှင်ပြီး ငါးမိနစ်အတွင်းမှာ speedometer က အလုပ် မလုပ်တော့ဘဲ အင်ဂျင်ချက် မီးလင်းလာတာပါ။ Speedometer အလုပ် မလုပ်တာကတော့ ဝါယာရိန်းစနစ် ကို စစ်ဆေးရမှာဖြစ်သည်…။
အများပြည်သူလူထုအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတများ တိုးပွားကြပါစေ…။ မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့်ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။ပြန်လည် မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဟိုကျဂကျြကားအမြိုးအစားတှမှောဖွဈတတျတဲ့ ခြို့ယှငျးမှုပွဿနာမြားနဲ့ စဈဆေးနညျးမြား
ဟိုကျဂကျြကားအမြိုးအစားဟာ ဂပြနျအခွစေိုကျ Daihatsu ကားကုမ်မဏီက ထုတျလုပျပွီး ပွညျတှငျးမှာ အသုံးမြားတဲ့ ကားအမြိုးအစားဖွဈတယျ.
အငျဂငျြပါဝါ ၆၆၀ စီစီ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဆီစားသကျသာတဲ့ လုပျငနျးသုံးကားဖွဈတယျ။ ဟိုကျဂကျြကားအမြိုးအစားမှာ ဖွဈတတျတဲ့ပွဿနာတခြို့ကို ဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
“ရဆေူတာ” ၂၀၁၁ မျောဒယျလျ ဟိုကျဂကျြမှာ ဖွဈတာပါ။ မောငျးနှငျနစေဉျမှာ အပူရှိနျ လှနျကဲပွီး ရတေိုငျကီ (radiator) ထဲက ရတှေေ ဆူပှကျလာတာပါ။ ဝပျရှော့ပျမှာ စဈဆေးတဲ့အခါ cooling temperature sensor ပကျြစီးတာပါ။ အဲဒါကွောငျ့ cooling temperature sensorကို အသဈလဲလှယျရမှာပါ…။
“မီး မကူးတာ” ၂၀ဝ၁ မျောဒယျ ဟိုကျဂကျြမှာဖွဈတာပါ။ အငျဂငျြက မီးမကူးတာ၊ ဆီမဖနျြးနိုငျတာတှေ ဖွဈလာတာပါ။ ပွဿနာကတော့ engine control unit (ECU)က အလုပျ မလုပျတာဖွဈတယျ။
“စကျနှိုးလို့ မရတာ” ၁၉၉၅ မျောဒယျဟိုကျဂကျြကို စကျ စတငျနှိုးလို့ မရတဲ့ပွဿနာပါ။ သော့ကို လှညျ့လိုကျတဲ့အခါ မီးလငျးလာပမေဲ့ စကျနိုးမလာတာပါ။
ပါဝါပေးတဲ့ စနဈက ခြို့ယှငျးတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘကျထရီကို စဈဆေးရမှာပါ။ ဘကျထရီ ငုတျတိုငျတှမှော ခြိတျဆကျတဲ့ ဝါယာတှကေိုလညျး သနျ့စငျပွီး ခြိတျဆကျမှု ရှိ/ မရှိ စဈဆေးရပါမယျ…။
“ဟိုကျဒရောလဈ ဘရိတျပွဿနာ” ၁၉၉၀ မျောဒယျလျ ဟိုကျဂကျြမှာ ဖွဈတာပါ။ ဟိုကျဒရောလဈဘရိတျ (Hydrolic Brakes) က ပုံမှနျအလုပျ မလုပျတော့တာပါ။
ဘရိတျ စနဈတဈခုလုံးကို စဈဆေးရမှာဖွဈပွီး… ဘရိတျဆီ ယိုစိမျ့မှု ရှိ/ မရှိ ကိုလညျး စဈဆေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဘရိတျဆီ ယိုစိမျ့တဲ့အတှကျ ဘရိတျဖိအား ကဆြငျးတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ…။
“ဂီယာ ပွဿနာ” ၂၀ဝ၇ မျောဒယျ ဟိုကျဂကျြမှာ… အျောတိုဂီယာ က ပုံမှနျ အလုပျ မလုပျတာပါ။ ဂီယာကို နံပါတျ ၃ အထိ ထားတဲ့အခါ အမွငျ့ဆုံး တဈနာရီ ၇၀ ကီလိုမီတာနှုနျးအထိ မောငျးနှငျ နိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နံပါတျ ၃ ဂီယာကနေ ပွောငျးလဲလို့ မရတာပါ။ အျောတိုဂီယာစနဈမှာ ခြို့ယှငျးခကျြ ရှိနတောပါ…။
“ပါဝါစတီယာရငျ ပနျ့မျ” ၂၀ဝ၃ မျောဒယျလျ ဟိုကျဂကျြမှာ ပါဝါစတီယာရငျ ပနျ့မျ (power steering pump) ခြို့ယှငျးတတျတာပါ။ အသဈ လဲလှယျရမှာပါ…။
“ဆီစားနှုနျး မြားလာတာ” ၂၀ဝ၇ မျောဒယျလျ ဟိုကျဂကျြမှာ ဖွဈတာပါ။ အိတျဇောက မီးခိုးထုတျလှတျတာ နညျးပါးပမေဲ့… ဆီစားနှုနျး မြားလာတာပါ။
အခွား ဟိုကျဂကျြကားတှေ လောငျစာဆီ တဈလီတာကို ၁၄ ကီလိုမီတာ မောငျးနှငျရပမေဲ့ အဲသညျဟိုကျဂကျြကတော့ လောငျစာဆီ တဈလီတာကို ၁၁ ကီလိုမီတာသာ မောငျးနှငျနိုငျပါတယျ…။
“အငျဂငျြခကျြ မီးလငျးတာ” ၂၀ဝ၃ မျောဒယျလျ ဟိုကျဂကျြမှာ အငျဂငျြခကျြ မီးလငျးလာတာပါ။ မောငျးနှငျပွီး ငါးမိနဈအတှငျးမှာ speedometer က အလုပျ မလုပျတော့ဘဲ အငျဂငျြခကျြ မီးလငျးလာတာပါ။ Speedometer အလုပျ မလုပျတာကတော့ ဝါယာရိနျးစနဈ ကို စဈဆေးရမှာဖွဈသညျ…။
အမြားပွညျသူလူထုအားလုံး နညျးပညာဗဟုသုတမြား တိုးပှားကွပါစေ…။ မူရငျးရေးသားသူအား လေးစားစှာဖွငျ့ခရကျဒဈ ပေးပါသညျ။ပွနျလညျ မြှဝခွေငျး ဖွဈပါသညျ။